Indiana: Kapitalin'ny marketing an'izao tontolo izao | Martech Zone
Talata, Septambra 21, 2010 Alahady 9 Febroary 2014 Douglas Karr
TechPoint dia manambara amin'ny fomba ofisialy Initiative momba ny marketing tsy refesina any Indiana, fampielezan-kevitra amin'ny fifandraisana amin'ny haino aman-jery nasionaly hametrahana an'i Indiana ho mpitarika ny sokajy fandrosoana haitao haingam-pandeha haingam-pandeha izay namboarin'i TechPoint ho refesina marketing.
Tanjon'ny Initiative Marketing Intiative:
Ataovy fampahafantarana fa ity faritra ity dia mamolavola sasany amin'ireo orinasan-tserasera sy serivisy serivisy indrindra eto amin'ny firenena raha ny ezaka sy teknolojia momba ny varotra vokatra.
Miteraha mpanjifa ho an'ny orinasa misy amin'ny alàlan'ny fampiroboroboana nasionaly. Izy io indray, dia hanampy antsika hanohy haka ireo nahazo diplaoma manan-talenta indrindra avy amin'ny sekoly Indiana ary hanohy hitombo ny asa sy ny asa aman-draharaha.
Manintona orinasa hamorona asa sy fampiasam-bola any Indiana. Indiana dia ekena hatrany ho iray amin'ireo fanjakana mora vidy indrindra ho an'ireo nahazo diplaoma amin'ny oniversite. Eo amin'ny lafiny ara-bola be ny fanjakantsika ary ny vidim-piainanay ambany dia mahatonga ny orinasa hanomboka lafo kokoa - manome vintana tsara kokoa hahombiazana sy fitomboana.
Miaraka amin'i Chris Baggott, reharehako fa anisan'ity fandraisana andraikitra ity hatramin'ny voalohany indrindra. Midera an'i Jim Jay sy ireo ekipa ao amin'ny Techpoint sy Ball State aho. Nahavita asa tsy mampino izy ireo tamin'ny famolavolana sy fanosehana ity hetsika ity.
Initiative momba ny marketing tsy refesina any Indiana
Inona no atao hoe marketing refesina? Measured Marketing dia microcluster fandraharahana teknolojia mifantoka amin'ny fampivoarana fitaovana sy paikady ho an'ny orinasa hampiasa angona hanatsarana na hanitsiana ny ezak'izy ireo amin'ny marketing na amin'ny mpanjifa na amin'ny orinasa.
Inona ny orinasa marketing refesina? Ireo orinasam-pivarotana refesina dia manome sehatra na serivisy ho an'ny marketing nomerika amin'ny alàlan'ny mailaka, media sosialy, fikarohana, horonan-tsary, finday ary teknolojia hafa mivoatra haingana, ary manome ny mpanjifa fanarahan-dia amin'ny fampanjariam-bola. DK New Media mirehareha amin'ny maha orinasa eo afovoany ny microcluster mivoatra.
Fa maninona i Indiana no mpilalao lehibe amin'ny indostrian'ny marketing refesina? Mihoatra ny Orinasa marketing 70 refesina antsoy ny fanjakan'ny trano Indiana, ary mifototra amin'ny angona misy, ny sehatra any Indiana dia nitombo 48% mihoatra ny firenena sisa.
Ka - raha mpianatra eny amin'ny oniversite ianao, orinasa te-handray anjara, orinasam-teknolojia marketing mitady hifindra toerana hahitana fotoana tsara kokoa, na orinasam-pandraharahana mitady hampiasa vola…. tazomy hatrany ny masonao raha te hahatazo ny fandrakofam-pirenena momba ny Initiative Marketing Voafetra ao Indiana!
Tags: Addvocateamazona sesfacebook adsfampiharana facebookfamolavolana Saryambany vidinyfandaniana doka twitterfikendrena ny toetrandro